Raa Avanafil uzuzu (330784-47-9) hplc ma98% | AASraw mmekọahụ ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwoke Jiri / Avanafil uzuzu
4.00 si 5 dabere na 3 ahịa Fim
SKU: 330784-47-9. Categories: Nwoke Jiri, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke uzuzu Avanafil (330784-47-9), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Avanafil uzuzu arụ ọrụ site na ọbara na-arịwanye elu na-erugharị na amụ n'oge mkpali mmekọahụ. Ọbara ọbara a nwere ike ime ka e wuo ya. Uru nke avanafil bụ na ọ dị nnọọ ngwa ngwa nke ime ihe ma e jiri ya tụnyere mmekọahụ ndị ọzọ na-akpali hormones. Ọ na-etinye uche ya ngwa ngwa, na-ebukwu ihe gbasara 30-45 nkeji.
Avanafil uzuzu vidiyo
Raw Avanafil uzuzu isi Characters
aha: Avanafil uzuzu
Molekụla Formula: C23H26ClN7O3
Ọbara arọ: 483.95
Raw Avanafil ntụ ntụ
Chemical Names: Raw Avanafil uzuzu
Aha aha: Stendra
Raw Avanafil ntụ ntụ Usage
Avanafil uzuzu maka Erectile Dysfunction
Ebe ọ bụ na Raw Avanafil uzuzu bụ ihe kachasị ọhụrụ na mgbakwunye nke ọgwụ ndị na-adịghị mma na erectile, ka anyị lebakwuo anya na ya tupu anyị ejikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ ED. N'ọnwụnwa ahụike, ọnụ ọgụgụ 77% zuru oke nke ndị ikom nwere nkwarụ na erectile n'ozuzu ha bụ ndị were Raw Avanafil uzuzu wetara ihe e wuru na tụnyere 54% nke ndị ikom weere placebo. N'etiti ndị mmadụ na-arịa ọrịa shuga na-arịa ọrịa shuga, 63% nwetara ụlọ ere mgbe ọ nụsịrị Raa Avanafil ntụ ntụ jiri ya tụnyere 42% onye were placebo.
Ka anyị leba anya n'ihe otu otu 12-week Phase III trial karịsịa. Enyere ụmụ mmadụ 646 ka ha were 50, 100, ma ọ bụ 200 mg nke ugbo 30 kwụ ọkụ na Avanafil tupu ịmalite ọrụ mmekọahụ. Enweghị ihe mgbochi na nri ma ọ bụ ịṅụ mmanya. N'ihe ọmụmụ 300 mere n'oge ọmụmụ ihe ahụ, 64% gaa na 71% nwere ihe ịga nke ọma n'etiti ndị ikom na-eji okpukpu Rana Avanafil tụnyere 27% n'etiti ndị mmadụ weere placebo. Ozi ọma ndị ọzọ: 59% na 83% nke 80 gbalịsiri ike na-enwe mmekọahụ karịa ihe karịrị 6 awa mgbe ọ nwụsịrị Raw Avanafil uzuzu na-aga nke ọma ma e jiri ya tụnyere naanị 25% nwara ndị mmadụ na-ewere placebo. N'ime ụmụ nwoke, Avanafil ntụ na-arụ ọrụ dị ka obere 15 nkeji. (Goldstein 2012)
N'ezie, otu ihe nwere ike ịwepụ Raw Avanafil uzuzu site na ọgwụ ndị ọzọ bụ ED bụ otú ngwa ngwa ọ na-arụ ọrụ. Dr. Wayne Hellstrom, bụ prọfesọ nke urology na Ụlọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọgwụ nke Tulane na New Orleans, kwuru n'akwụkwọ akụkọ Reuters na Raw Avanafil uzuzu "nwere ike ime ngwa ngwa nke anọ," dịka nchọpụta ahụike gosipụtara na ọ nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa dị ka 15 nkeji. Otú ọ dị, e nwere akụkọ banyere Cialis ntụ ntụ na-arụ ọrụ na ihe dịka 15 nkeji.
Kedu ihe nyocha nke Avanafil uzuzu
Maka onu ogwu ogwu (mbadamba):
Avanafil uzuzu biara dika mbadamba nkume iji wepu ya. Maka ndị na-ewere 100 mg ma ọ bụ 200-mg doses, a na-ejikarị nri ma ọ bụ na-enweghị nri dịka mkpa, gbasara 15 nkeji tupu enwe mmekọahụ, ọ bụghị ihe karịrị otu ugboro n'ụbọchị.
Maka ndị mmadụ na-ewere 50-mg dose, a na-ejikarị ma ọ bụ na-enweghị nri ma ọ bụ na-enweghị nri ma ọ bụ na-enweghị nri dịka mkpa, dịka mkpa, gbasara 30 nkeji tupu arụ ọrụ mmekọahụ. Ejila okpukpo Rana Avanafil karịa ugboro ugboro na 24 awa.
Ụmụaka anaghị eji atụ aro.
Usoro nke ọgwụ a ga-adị iche maka ọrịa dị iche iche. Soro iwu dọkịta gị ma ọ bụ ntụziaka dị na label. Ozi ndị a na-agụnye naanị usoro ọgwụgwọ a. Ọ bụrụ na ụdị dose gị dị iche, adịghị agbanwe ya ọ gwụla ma dọkịta gị agwa gị ka ịme ya.
Olee otú Raw Avanafil uzuzu na-arụ ọrụ
Raa Avanafil uzuzu di na ogwu nke a na - akpọ phosphodiesterase (PDE) inhibitors. A na - eji ya na - eme ihe na - adịghị mma nke erectile (ED: enweghị ike; enweghi ike inweta ma ọ bụ mee ka ụlọ na - arụ ọrụ). Nke a na-eme ka nwoke a nweta aha ya site na isi ihe na-arụsi ọrụ ike nke na-enyere aka ntanye ọbara n'ime ahụ n'ụzọ nkịtị. E nwere ihe ndị ọzọ na-eme ka Raana Avanafil uzuzu dị irè kama enweghi mmetụta na mmetụta dị ukwuu nke isi ihe nwere ike inye.
Ọ na-arụ ọrụ site na ọbara na-arịwanye elu na-erugharị na amụ n'oge mkpali mmekọahụ. Ọbara ọbara a nwere ike ime ka e wuo ya. Raa Avanafil uzuzu anaghị agwọ ọrịa ma ọ bụ mụbaa agụụ mmekọahụ. Raa Avanafil ugbo anaghị egbochi ime ime ma ọ bụ mgbasa nke ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ dịka nje virus nke nje mmadụ (HIV).
Raa Avanafil uzuzu bu ogwu ogwu nke eji eme ihe maka imetu ihe na adighi ike (enweghi ike iru ma o bu kwadoo ulo oru penile), nke a na-amarakwa dika unctalction erectile (ED). Ọ bụ na otu ọgwụ ndị a na - akpọ ndị na - emechi ọgwụ phosphodiesterase nke gụnyere tadalafil (Cialis ntụ ntụ), sildenafil (Viagra) na vardenafil (Levitra). A na-emepụta nke penis site na njuputa nke penis na ọbara. Na-emejupụta n'ihi na ọbara arịa ndị na-ebute ọbara n'ọbara na-amụba n'ọtụtụ ma na-enyefekwu ọbara na penis, na, n'otu oge ahụ, arịa ọbara na-ebute ọbara site na penis belata nha ma wepụ obere ọbara site na penis . Mkpali mmekorita nke na - eduga n'inwe ụlọ na - akpata mmepụta na ntọhapụ nke nitric oxide na ntinye. The nitric oxide na-akpata enzyme, guanylate cyclase, iji mepụta cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Ọ bụ cGMP nke bụ isi maka ịbawanye ụba ma belata ọnụ ọgụgụ ọbara ndị na-ebuga ọbara na site na amụ, na-eme ka e wuo ya. Mgbe cGMP na-ebibi enzyme ọzọ, phosphodiesterase-5, ọbara ọbara laghachiri n'ogologo ha, ọbara na-ahapụ akwụkwọ ahụ, ụlọ ahụ ga-akwụsịkwa. Raa Avanafil uzuchi egbochi phosphodiesterase-5 si na-ebibi cGMP ka cGMP dịgide n'ogo. Nkwụsi ike nke cGMP na-eduga n'ọgba aghara aghara aghara site na mkpịsị ọbara ọbara. Akwukwo FDA na April 2012 kwadoro Avanafil uzuzu.
Nchegbu metụtara nsogbu ọjọọ:
• Ngosipụta ihuenyo: Nwere ike ime ka enweghị mmerụ nke ịkpa ókè. Jiri nlezianya na ndị ọrịa na retinitis pigmentos; ndi di ntakiri enwere nsogbu ndi mmadu nke retinal phosphodiesterases (enweghi ozi nchekwa di).
• Ntị nke na-anụ ihe: Ọnụ ọgụgụ mberede ma ọ bụ ọnwụ nke ntị anụwo ihe na - adịghị adị; enwe ike ịmalite mgbanwe ntanetị na dizziness. Achọpụtaghị mmekọrịta dị n'etiti ọgwụgwọ na nkwụsị ntị.
• Mkpụrụ ụbụrụ: Mbelata na mgbali elu pụrụ ime n'ihi mmetụta vasodilator; jiri nlezianya mee ihe na ndị ọrịa nwere njedebe nke ventricular aka ekpe (stenosis aortic or hypertrophic obstructive cardiomyopathy); nwere ike na-enwe mmetụta dị nro na omume rụrụ arụ. Iji otu ihe na-eme ka a na-agwọ ọrịa na-eme ka ọkpụkpụ-adrenergic nwere ike ịkpata ụda mgbaàmà; ndị ọrịa kwesịrị ịdị na-agwọ ọrịa ọbara tupu ha ebute ọgwụ na ọgwụ kachasị dị ala. Ndị ọrịa kwesịrị izere ma ọ bụ belata oge nkwonkwo ethanol bara uru dị ka nke a nwere ike ime ka ohere nke mgbapụta symptomatic dịkwuo elu.
• Priapism: Ụlọ nrụrụ> Ọtụtụ oge elekere 6 ka esi kọọ (adịkarịghị). Gwa ndị ọrịa ka ha chọọ nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na ụlọ eregide> 4 awa. Jiri nlezianya na ndị ọrịa nwere ọnọdụ nke nwere ike ibute ha na priapism (sickle cell anemia, otutu myeloma, leukemia).
Powder Powder Avanafil
Raw Avanafil ntụ ntụ Marketing
Ndi Raa Avanafil uzuzu enwere ihe obula
Raa Avanafil uzuzu nwere ike ime ka o nwee nsogbu. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na otu n'ime mgbaàmà ndị a dị njọ maọbụ na ị gaghị apụ:
Ụfọdụ mmetụta ndị nwere ike ịdị njọ. Ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime mgbaàmà ndị a, kpọtụrụ dọkịta gị ozugbo ma ọ bụ nweta ọgwụgwọ mberede:
ụlọ nke na-adị ogologo karịa oge 4
ọhụhụ na mberede nke ọhụụ na otu ma ọ bụ abụọ anya (lee n'okpuru maka ozi ndị ọzọ)
ụda nhụ ụda na mberede (lee anya maka ozi ndị ọzọ)
na-eti na nti
Raa Avanafil uzuzu nwere ike ime ka nsogbu ndị ọzọ. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla dị iche iche mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a.
Esi zụta Avanafil uzuzu si AASraw
AASraw na-enye 99% Avanafil raw ntụ ntụ banyere dị ka mmekorita mmekorita nke ozo maka ojiji nke ozo.
Ntuziaka ntụziaka nke Avanafil Raw Powder:
Mmekọahụ na-enwupụta ntụ ntụ: Vardenafil HCL ntụ ntụ VS Avanafil uzuzu
3 reviews maka Avanafil uzuzu
Avanafil uzuzu bu ihe omuma
BỤ Avanafil uzuzu
Earnest - 12 / 09 / 2018
generic viagra nwere ike ịme ya n'enweghị ọgwụ dọkịta
Nootropics ntụ ntụ (16)